ကရင်နီပြည်သူလူထုကို လေကြောင်းရန်မှ ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့်အချက်တွေကို KSCC ထုတ်ပြန် – PVTV Myanmar
ဇန်နဝါရီ ၁၇ ၊ ၂၀၂၂
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေက ကရင်နီပြည်နယ်မှာ ပြည်သူလူထုကို လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ သတ်ဖြတ်မှုတွေလုပ် ဆောင်နေတာမို့ ကရင်နီပြည်နယ်အတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (KSCC)က ပြည်သူတွေကို လေကြောင်းရန်ကနေ ကာကွယ်နိုင်ဖို့အရေးအ တွက် လုပ်ဆောင်ရမယ့် အချက်တွေကို ဒီနေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ စစ်ရှောင်နေရာ ဒါမှမဟုတ် မြင်ကွင်းကွယ်တဲ့တောင် စောင်းတွေ ကမ်းပါးယံတွေမှာ ဗုံးခိုကျင်းတွေ အမြန်ဆုံးတူးထားကြဖို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါအပြင် မြေပြန့်မြေညီမှာတူမယ်ဆိုရင် အနည်းဆုံး အနက်၅ ပေ၊ အကျယ်ကို မိသားစုရှိတဲ့ ဦးရေအတိုင်းအတူးဖို့၊ လုံခြုံကောင်းမွန် ပြီး ခိုင်ခံတဲ့ အဖုံးတခုရရှိနိုင်ဖို့အတွက် အချင်း ၁ ပေခန့် လုံးပတ်ရှိတဲ့ သစ်လုံး/သစ်တုံးတွေကို တတုံးနဲ့တတုံး နေရာမရွေ့စေဖို့ သံ ကြိုး/သွပ်နန်းကြိး(မရှိပါက ဆိုင်ကယ်ချိန်းကြိုး) တွေနဲ့ ရိုက်နှက်ချိတ်တွဲပါ။ သစ်တုံးတွေအပေါ်မှာ မိုးကာ၊ ပျဉ်ပြား၊ သံပြားတို့နဲ့ ထပ် ပြီး မြေဖို့ပါ။ မြေထုက အနည်းဆုံး ၂ ပေနဲ့အထက် ထူထူဖိုနိုင်ဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ လုံခြုံရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ အပြင် ကျင်းကို ကောင်းကင်ကနေလဲ မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး။
တွင်းထဲကို အသင့်ပြေးဝင်ပုန်းခိုနိုင်ဖို့နဲ့ အဝင်အထွက် တည့်တိုးမဖြစ်စေဖို့ တဆစ်ချိုး တူးဖောက်ပေးရပါမယ်။ တွင်းက နက်လေ ကောင်းလေ၊ ကျယ်လေ ကောင်းလေ၊ အဖုံးမြေထူလေ ကောင်းလေလို့ ဆိုထားပါတယ်။
တကိုယ်ရေးသုံး မုန့်ခြောက်၊ သောက်သုံးရေ၊ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး၊ ဓာတ်မီး၊ ဖုန်း၊ ရေဒီယို၊ ပါဝါဘန့်၊ ဓား၊ အဝတ်အထည်၊ စောင် အစရှိတာတွေကို တပါတည်းပြင်ဆင်ထားကြရပါမယ်။ တိုက်လေယာဉ်ပျံသန်းတဲ့အခါ အရေးပေါ်သတိပေးချက်တွေကို အလေးထားကြဖို့လည်း သတိပေးထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အသက်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းဖို့အတွက် တိုက်လေယာဉ်ကို တွေ့ပြီဆိုတာနဲ့ ချက်ခြင်းဗုံးခိုကျင်းတွေဆီကို ပုန်းရှောင်ဖို့လိုတယ်ဆို တာနဲ့ လမ်းပေါ်တွေ ဟင်းလင်းပြင်ဖြစ်နေတဲ့ နေရာတွေကနေ ထွက်ကြည့်တာမျိုးမလုပ်ဖို့အတွက်လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ ကာလအတွင်းမှာ မလိုအပ်ဘဲ သွားလာလှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့ ဘေးကင်းလုံခြုံရာ နေရာတွေကို အသိသတိနဲ့ ပြောင်းရွှေနေထိုင်ကြဖို့၊ မိမိတို့အနီးအနားက ပိတ်မိနေတဲ့သူတွေကိုတွေ့ရှိခဲ့ရင်တော့ အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအသင်းတွေကို ချက်ခြင်း အကြောင်းကြားဖို့လည်း ဖော်ပြထာပါတယ်။
တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ မမှန်ကန်တဲ့ သတင်းဝါဒဖြန့်မှုတွေကို ရှောင်ကြဉ်ပေးကြဖို့နဲ့ မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက် အလက်တွေကိုသာ အချင်းချင်း မျှဝေပေးကြဖို့ အချက်တွေကို ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားဖြင့် ထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်အဖြစ် Zoland Voice TV ရဲ့ “TV Decision Making” ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
BMC နှင့် NST မှ ပူးပေါင်းစီစဉ်သော အာဏာရှင်စနစ်၏ ဘဏ္ဍာတိုက်များ – ရေနံနှင့် သဘာ၀ဓာတ်ငွေ့ အပိုင်း ( ၂ )
Ngwe Oo Maung says:
2022-01-17 at 7:39 PM
From Myat Tun Oo
ဒီပိုစ်ကို မအလတပ်ကဖြုတ်ချတယ်။ ဒါဆိုအားလုံးက ပြန်ဖြန့်ရမယ်ဆိုတာ သိမှာပါ။
အမေရိကန်လေကြောင်းကို တာလီဘန်နဲ့ ဗီယက်နမ် ဘယ်လိုခုခံခဲ့သလဲ?
ယခုရက်ပိုင်းမှာ မအလတပ်ဟာ ရဟတ်ယဉ်တွေနဲ့ စစ်ကိုင်း၊ ကယားနဲ့ ကရင်ပြည်နယ်မှာ ထိုးစစ်ဆင်နေတာ အားလုံးသိကြမှာပါ။ လေယဉ်ပျံက ဗုံးကြဲလိုရပေမယ့် အဲဒါက အကုန်အကျများသလို မထိရောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ရဟတ်ယဉ်ကတော့ အနီးကပ်ပစ်လိုရသလို မိမိလိုတဲ့တပ်ကို အနီးကပ်ချပေးပြီး စစ်ဆင်လိုရလို ပိုထိရောက်ပါတယ်။ ရဟတ်ယဉ်ကို အမေရိကန်က အာဖဂန်၊ အီရတ်၊ ဆိုမာလီးယားနဲ့ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲတွေမှာ သုံးခဲ့ပြီး ရန်သူက အမေရိကန် ရဟတ်ယဉ်ကို ပစ်ချနိုင်တာ၊ ရှောင်နိုင်တာတွေ တွေ့ရပါတယ်။ သူတိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့သလဲ လေ့လာကြည့်ရအောင်။
မြန်မာပြည်မှာ မအလတပ်ဟာ စစ်ကိုင်း၊ ကယားနဲ့ ကရင်ပြည်မှာ ရဟတ်ယဉ်သုံးနေတာပါ။ ကယားက ရဟတ်ယဉ်ကို ပစ်ချပြီးမှ မအတပ်ဟာ နှစ်ခါပြန် စဉ်းစားသွားရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အလွယ်ဆုံးအဖြေက ရဟတ်ယဉ်ပစ်လိုရတဲ့လက်နက်ရှိရင် သူရဟတ်ယဉ် သုံးရဲတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ မနေ့က ကရင်က DKBA စခန်းလေးကို ဝင်တိုက်သွားတာဟာ ရဟတ်ယဉ်နဲ့ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ ဒါဆိုအခြားနိုင်ငံတွေမှာ အမေရိကန် ရဟတ်ယဉ်ပေါ်က လူချလိုမရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲ?
အခြားလက်နက်တွေက စျေးကြီးပါတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်က stinger တို တရုတ်ထုတ် FN6 တိုပါ။ သူက အနိမ့်ပျံ လေယဉ်အချိုတောင် ပစ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါတွေက သေချာ အမြင့်ကအရာတောင် ပစ်ချနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလက်နက်တွေက စျေးကြီးသလို ဝယ်ချင်တိုင်းမရနိုင်ပါ။ ယခုဟာက ရဟတ်ယဉ်ပေါ်က ပစ်တာနဲ့ တပ်ချပေးတာပါ။ ရဟတ်ယဉ်ပေါ်က လူချဖိုက ပေ ၁၅၀ လောက်ကနေပါ။ ထိုအချိန်မှာ ပစ်နိုင်တာက RPG7နဲ့ ၀.၅ M2 B machine gun တွေပါ။ RPG7ဟာ မီတာ ၇၀၀ အထိ လေပါ်သွားပြီး ထိနိုင်ပါတယ်။ မီတာ ၉၀၀ ဆိုရင်တော့ သူ့ဖာသာ ပျက်ဆီးသွားပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် RPG7ဟာ တပ်ချတဲ့ ရဟတ်ယဉ်ကို ပစ်ချနိုင်ပေမယ့် မီတာ ၇၀၀ အထက်ဆိုရင် ဘာမှလုပ်မရပါ။ ၀.၅ M2B စက်သေနတ်က ကိုက်တစ်ထောင်အထိ ပစ်လိုရသလို သယ်သွားရလွယ်ပါတယ်။ လူချတဲ့ ရဟတ်ယဉ်ရော ချတဲ့လူ မြေပြင်မရောက်ခင်ပါ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ အာဖဂန်မှာ အမေရိကန်ရဟတ်ယဉ်အများစုထိတာ RPG နဲ့ အထူးတပ်ချချိန် အပစ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဗီယက်နမ်နဲ့ ဆိုမားလီးယားမှာက စက်သေနတ်ပါ။
ဒီဆောင်းပါးဟာ ပုံမှန် AK 47 တောင်လူတိုင်းမရနိုင်သေးတဲ့ စစ်ကိုင်းတိုင်းက အဖွဲတွေအတွက် ဟာသလို ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီစာဖတ်နေတဲ့ PDF များက NUG ရဲ့ဦးဆောင်မှုကို ခံယူပြီး NUG ကလဲ အဆိုပါလက်နက်တွေကို ထောက်ပံ့နိုင်အောင် ပြည်ပက မြန်မာများထံက PRF ကနေ အလှူခံပေးပါ။ လှူသူများလဲ ဖြစ်တဲ့နေရာ ငါးပွက်ရာ ငါးစာမချဘဲ ဗျူဟာကျကျ လှူနိုင်ကြပါစေ။ ဗျူဟာကျမှ တော်လှန်ရေးကနိုင်မှာပါ။ ဗျူဟာမြောက်ဖို NUG ကိုသာလှူပါ။ ဒီလက်နက်တွေရှိရင် အပေါ်က ဗုံးကြဲလိုရခဲ့ရင်တောင် မအလတွေ ဆင်းလာရဲမှာ မဟုတ်ပါလို အာမခံပါတယ်။ ပြည်သူက တစ်ဖွဲချင်းဆီမလှူဘဲ NUG ထံလှူပြီး NUG က ဗျူဟာကျကျ မိမိဩဇာခံအဖွဲကို ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားပါလို တိုက်တွန်းပါရစေ။
Credit to : Myat Tun Oo